Inona ny RFID
Ny famaritana matetika ny radio, na RFID, dia teny mahazatra ho an'ny teknolojia mampiasa onja onjam-peo hamantarana ho azy ny olona na zavatra. Misy fomba maro amantarana azy, fa ny mahazatra indrindra dia ny mitahiry laharana mitantara olona na zavatra iray, ary angamba fampahalalana hafa, amin'ny microchip mifatotra amin'ny antena (ny puce sy ny antena miaraka dia antsoina hoe transponder RFID na marika RFID). Ny antena dia ahafahan'ny chip mamindra ny mombamomba azy amin'ny mpamaky. Ny mpamaky dia mamadika ny onjam-peo hita taratra avy amin'ny tag RFID ho lasa fampahalalana nomerika izay azo ampitaina amin'ny solosaina afaka mampiasa azy.
Ahoana ny fiasan'ny rafitra RFID?
Ny rafi-RFID dia misy tag, izay misy microchip misy antena, ary interrogator na mpamaky misy antena. Ny mpamaky dia mandefa onja elektromagnetika. Ny antena tag dia zahana handray ireo onja ireo. Ny tag RFID passive dia manovo hery avy amin'ny saha noforonin'ny mpamaky ary mampiasa azy io hamatsiana ny boriborintany microchip. Ny chip dia manamboatra ny onja izay averin'ny tag amin'ny mpamaky ary ny mpamaky dia mamadika ireo onja vaovao ho lasa angona nomerika
Fa maninona no tsara kokoa ny RFID toy izay mampiasa kaody bara?
Tsy voatery hoe "tsara kokoa" noho ny kaody bara ny RFID. Ny roa dia teknolojia samy hafa ary manana fampiharana hafa, izay indraindray mifanindry. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa dia ny kaody bara dia teknolojia azo zahana. Izany hoe, ny scanner dia mila "mahita" ny kaody bara hamakiana azy, izay midika fa matetika ny olona dia mila manitsy ny kaody bara mankany amin'ny scanner vao hovakiana. Ny famantarana ny fahita matetika amin'ny radio dia tsy mitaky tsipika fahitana. Ny RFID tags dia azo vakiana raha mbola ao anatin'ny mpamaky iray izany. Ny kaody bara dia misy lesoka hafa ihany koa. Raha rovitra, maloto na milatsaka ny marika iray, dia tsy misy fomba fitiliana ilay entana. Ary ny kaody bara mahazatra ihany no mamantatra ny mpanamboatra sy ny vokatra fa tsy ilay singa tokana. Ny kaody fisotroana amin'ny baoritra ronono iray dia mitovy amin'ny iray hafa, ka tsy ahafahana mamantatra hoe iza no mety handalo ny daty famaranana azy voalohany.
Inona no mahasamihafa ny matetika ambany, avo, ary avo-avo?
Tahaka ny feon'ny radio anao amin'ny fahita matetika mba handrenesana fantsona samihafa, ny tagan'ny RFID sy ny mpamaky dia tokony ampifanarahana amin'ny hatetika mitovy aminy mba hifandraisana. Ny rafi-RFID dia mampiasa hatetika maro samihafa, fa amin'ny ankapobeny ny ambany indrindra dia ambany- (manodidina ny 125 KHz), avo- (13.56 MHz) ary ny hatetika avo indrindra, na UHF (850-900 MHz). Ny microwave (2,45 GHz) dia ampiasaina amin'ny rindrambaiko sasany. Ny onjam-peo dia mihetsika amin'ny fomba hafa amin'ny fahita matetika, noho izany dia mila misafidy ny fahita matetika ianao amin'ny fampiharana marina.
Ahoana no ahafantarako hoe iza matetika no mety amin'ny fampiharana ahy?
Ny fahita isan-karazany dia samy manana ny mampiavaka azy ireo amin'ny fampiharana hafa. Ohatra, ny mari-pahaizana ambany ambany dia mora kokoa noho ny marika ultra high frequency (UHF), mampiasa herinaratra kely kokoa ary afaka miditra amin'ny akora tsy metaly. Izy ireo dia mety amin'ny fanaovana scanning zavatra misy rano ambony, toy ny voankazo, eo akaiky eo. Matetika ny hatetika UHF dia manome tolotra tsara kokoa ary afaka mamindra data haingana kokoa. Saingy mampiasa herinaratra bebe kokoa izy ireo ary tsy dia mandalo fitaovana. Ary satria mirona "voatarika" kokoa izy ireo, dia mitaky lalana mazava eo anelanelan'ny marika sy ny mpamaky. Ny tag UHF dia mety ho tsara kokoa amin'ny fanaovana scanning boaty entana rehefa mandalo amin'ny varavarana helodrano mankamin'ny trano fitehirizana izy ireo. Mety tsara kokoa ny miara-miasa amin'ny consultant, integrator na mpivarotra izay afaka manampy anao hisafidy ny fahita matetika amin'ny fampiharana anao